War dheeraad ah:Weerarkii deegaanka Laanta Buure oo laga hadlay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jeneraal Axmed Maxamed Buraale, Taliyaha Qeybta 12 Abril oo ay hoostagayeen Ciidamada Xoogga Dalka ee ku sugan Deegaanka Laantabuuro ee gobalka Shabeellaha Hoose oo xxalay weerareen Maleeshiyaadka Al-Shabaab, ayaa Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA u faahfaahiyay sidii uu u dhacay weerarka ay Saldhiggaasi Xalay ku soo qaadeen Malaashiyaadka Al-shabaab.
Jeneraal Buraale, Waxa uu sheegay in kooxda al shabaab ay Xerada soo weerartay laba jeer, iyagoo isku dayayay in ay qabsadaan xerada, balse waxa uu tilmaamay in ciidama oo Feejignaa ay iska caabiyeen weeraradaasi oo ay ku biloowday baabuur ay ku xiranyihiin walxaha qarxa.
Taliyaha wuxuu sheegay in Shan Askari oo kamid ah ciidankii ku sugnaa saldhigga ay geeriyoodeen labo kalena ay ku dhaawacmeen, halka maleeshiyaadkii soo weerarayna ay ugeysteen Qasaare intaas kabadan balse aanu Cayimi karin.
Sidoo kale Taliyaha Qeybta 12 Abril, ayaa tilmaamay in maleeshiyaadka ay Qaateen laba gaari ay ciidamadu lahaayeen, isagoo beeniyay sheegashada kooxda al shabaab ee ah in ay laayeen Ciidamo badan ayna kaxeysteen gaadiid dagaal oo kabadan intaasi.
Gen Buraale ayaa Xusay in marna aysan u suuragalin maleeshiyaadka Weerarka Soo qaaday in la wareegaan gacan ku heynta xerada oo ahaa damacooda ugu weyn, wuxuuna intaa ku daray in kooxda weerarka soo qaaday oo aad u abaabulneyd ay Afar Jiho ka soo weerartay xerada, islamarkaana ay isticmaalayeen qaraxyo iyo hub culus, taas oo suurta galisay in ciidamada oo difaac ku jiray ay qasaare badan gaarsiiyaan maleeshiyaadkaasi.
Raisul wasaare ku-xigeenka Somalia iyo wafdi isugu jira wasiiro & saraakiil gaaray Kismaayo